आजकाे राशिफलः वि.सं. २०७६ चैत्र ०७ गते शुक्रवार – खबर खुराक
Home > Uncategorized > आजकाे राशिफलः वि.सं. २०७६ चैत्र ०७ गते शुक्रवार
७ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०६:५३
वि.सं. २०७६ चैत्र ०७ गते शुक्रवार, चैत्र कृष्ण (चिल्लागा) एकादशी, श्रवण नक्षत्र, मकर राशिको चन्द्रमा, शिव योग, बालब र कौलव करण, परिधावी संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, आजको चाडपर्व र उत्सव : पापमोचिनी एकादशी व्रत,
आजको मूहुर्त : रुद्राभिषेक (शिववास जुरेको, रुद्री/पूजा गर्न मिल्ने दिन), अक्षरारम्भ, शिलान्यास (सामान्य), दैलो राख्ने, पुराणश्रवण, कलशचक्र,
भोलिको चाडपर्व र उत्सव : शनि प्रदोष व्रत, देउपाटनमा देशोद्धार पूजा, महावारुणी योग बिहान ०८ बजेर ३१ मिनेटदेखि, द्विपुष्कर योग बिहान ०९ बजेर ०३ मिनेटसम्म, धनिष्ठा पञ्चक प्रारम्भ बिहान ०७ बजेर ३६ मिनेटमा,
भोलिको मूहुर्त : रुद्राभिषेक (शिववास जुरेको, रुद्री/पूजा गर्न मिल्ने दिन), अग्निवास (सामान्य यज्ञ र हवन गर्न मिल्ने दिन), द्रव्यप्रयोग वा लगानी, कलशचक्र ।
पुरुषार्थद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ। पहिले दुश्मनी गर्नेहरूले पनि मित्रताका हात अघि बढाउनेछन्। काम पूरा नभए पनि आंशिक लाभको सम्भावना।
परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता दुस्ख पाइनेछ । महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा आफ्नैले बाधा पुर्यासउन सक्छन्। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइने सम्भावना छ। मान्यजनको मन जित्ने प्रयत्न गर्नुहोला।
चिताएको काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। व्यवसायको लगानीले मनग्गे धनलाभ हुनेछ। आलस्य त्यागेर मिहिनेत गर्नुपर्ने समय छ। प्रतिस्पर्धीहरूले समेत सहयोगका हात फैलाउनेछन्। नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ।
पारिवारिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । सानो प्रयासले नै काम बन्नेछ। सुन्दर पहिरनमा मन रमाउनेछ। आगन्तुकहरूको उपहारले प्रसन्नता मिल्नेछ। कामले जीवनशैली व्यस्त रहनेछ।
अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि आत्मविश्वास, मिहिनेत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्या्उनेछ। समस्या दर्साउँदा सहयोगीहरूको समेत साथ प्राप्त हुनेछ। काम पूर्ण नभए पनि प्रयत्न गर्दा आंशिक लाभ अवश्यै हुनेछ।
प्रकाशित मिति: ७ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०६:५३
Previous: सामान्य मुद्दाका आरोपी थुनामुक्त हुने, मुद्दा हेरी कैदी पनि छाडिने
Next: कोरोना विशेष अस्पताल आजदेखि सञ्चालन